ब्याट्सम्यानले छक्का चाैका हान्दा टाउकोको हेलमेट फुटाउँ जस्तो लाग्छ– सोमपाल (भिडियो) | | Neplays.com
ब्याट्सम्यानले छक्का चाैका हान्दा टाउकोको हेलमेट फुटाउँ जस्तो लाग्छ– सोमपाल (भिडियो)
By Neplays	 Last updated Jan 27, 2019
युएईविरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा ब्याटबाट रोहित पौडेलले कमाल गर्दा बलबाट सोमपाल कामीले जादु देखाए । उनीहरु एकदमै मिल्ने साथी पनि हुन् । उमेरले केही कान्छो भएकाले रोहितले सोमपाललाई दाई र सोमपालले रोहितलाई भनेर सम्बोधन गर्छन् । आजको खेलका दौरान ती दुईका बीचमा बाजी नै थियो ।
जितकाे खुसी ?
एक दिवसीय क्रिकेटमा प्लान अनुसार खेल्नु पर्छ । हिजोको प्लान अनुसार १० ओभर भित्र विकेट गुम्यो भने म वान डाउन जान्छु भनेर । म बलर भएकाले पनि हिजो कस्तो सट खेल्ने भनेर राम्रोसँग बुझेको थिए । त्यसैगरी हिजोको विकेट एकदमै टफ थियो । हिजो हामीले १५० रन मात्रै बनाएको भए हामीले पहिलो खेल पनि जित्न सक्ने थियौं । हिजो हामीले ११३ रन पनि करिब करिब सेभ गरेका थियौं । हिजो जीतेको भए पनि त्यतिधेरै खुसी हुने ठाउँ थिएन् । आजको जीत भनेको सबैभन्दा अविश्मरणीय रहने छ । आजको जीतमा मेरो बलिङले गर्दा मात्रै होइन पुरै टिमले राम्रो खेलेर राम्रो नतिजा हात पार्न सफल भयौं । हामीले झण्डै २५० को लक्ष्य दिने प्लान हामीले गरेका थियौं । त्यसैअनुसार हामीले काम पनि ग¥यौं । त्यसैका आधारमा हामी सफल भयौं त्यसैले एकदमै खुसी छु ।
सुरुमै चार विकेट लिए पछि त मनोबल पनि बढ्यो होला ?
त्यस्तो केही हुँदैन । मुभेन्टम माथि हुन्छ । पावर प्लेमा धेरै भन्दा धेरै विकेट लिएपछि खेलमा त्यसै हावी हुन सकिन्छ । एकातिरबाट विकेट लिँदै जाने हो भने अरु बलरलाई पनि सजिलो हुन्छ । तर व्याट्सम्यानलाई भने अप्ठेरो पर्छ । त्यसैले आफ्नो मुभेन्टम छाड्नु हुँदैन । बलिङमा शुरुको प्लान के थियो ? हिजोको जस्तो विकेट थिएन । हिजोको विकेट अनुसार आज स्वीङ हुन्छ जस्तो लागेको थियो । तर आजको विकेट स्लो थियो । पहिलो ओभरको शुरुका बलमा पिचिङको आईडिया नहुँदा मैले रन खाए । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र र रोहितको सल्लाह अनुसार हल्का अगाडि बल फाल्दा ब्याट्सम्यानलाई अप्ठेरो पर्छ भनेपछि त्यस्तै गरे ।
ब्यक्तिगत सफलतालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
एकदमै खुशी लाग्छ । मैले पाँच विकेट लिनु भन्दा पनि टिमले जित्यो त्यो ठूलो कुरा हो । हिजो हामी पराजित हुँदा एकदमै नराम्रो लागेको थियो । तर आज जितेपछि एकदमै खुसी छु । हामीले एक दिवसीय मान्यता पाएपछि हामी माथि प्रेसर पनि छ । एक दिवसीय मान्यतालाई टिकाइ रहनका लागि पनि ।
तपाईको भूमिका कुन ठाउँमा उत्कृष्ट हुन्छ ?
हिजो ब्याटिङ गर्दा पनि सजिलै गरे । आज पनि बलिङ राम्रो गरे । मलाई टिमले दिने जुन कुनै भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छु । आवश्यकता परे ब्याटिङ नै किन नहोस । अब मेरो ध्यान भनेको तेस्रो खेलका लागि छ । हिजो मेरो जिम्मेवारी भनेको विकेट टिकाउनु थियो टिकाए । आज विकेट लिनु थियो लिए । जस्तो भूमिका हुन्छ त्यस्तै गर्छु ।
जर्सी मम्वर किन चेन्ज गरेकाे हाेला ?
म सचिन तेन्दुलकरको ठूलो फ्यान हुँ । १० नम्बर जर्सी सचिनले लगाउने गर्थे । मैले अहिलेसम्म सचिनलाई भेटेको छैन । जतिबेला क्रिकेट शुरु गरे मैले उहाँलाई नै देखेर शुरु गरेको हो । त्यसैले मैले १० नम्बर जर्सी लगाए । अहिले १ नम्बरकोज जर्सी कसरी आयो त्यो त मलाई पनि थाहा छैन । ‘बट नम्बर वान इज लक्की फर मी ।’
रोहितको उपलव्धीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
रोहित करण र म एकदमै क्लोज छौं । उसले रन बनाउँदा मलाई एकदमै खुसी लाग्छ । आज ब्याटिङ गर्न जाँदा मैले भनको थिए, आज ५० हान्यौं भने खाजा मेरो तर्फबाट । आज ५० हानेको ब्याट पनि मैले दिएको हुँ । त्यसपछि मैले बलिङ गर्दा रोहितले आएर भन्यो दाई तपाईले पाँच विकेट लिनु भयो भने मेरो तर्फबाट लन्ज भनेका थिए । त्यसैले हामी एकदमै मिल्ने पनि गर्छौ ।
कुशल मन्डिसलाई ज्यान मुद्दा लाग्न सक्ने
कोरोना : मशरफे मोर्तजाको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ
डी कक बने उत्कृष्ट खेलाडी
क्यानले खेलाडीसँगकाे केन्द्रिय सम्झाैतामा हेरफेर गर्ने, ए प्लस श्रेणीलाई हटाइने !
इंग्ल्याण्ड टिमकाे घाेषणा
सरफराजलाई कप्तानबाट हटाउनु गल्ति-इन्जमाम
सन्दिपले लगातार तेस्राे सिजन क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्ने
मुलपानी सहित चार स्थानकाे मैदान निर्माणका लागि परिषदद्वारा टेन्डर…
एकै खेलमा तीन पेनाल्टी, बार्सिलाेनाकाे उपाधि यात्रामा नराम्राे…
सक्रिय खेलाडी नभएपनि नयाँ भुमिकामा फुटबलमा देखिनेछु-रितेश थापा